Iwo mabhenefiti eUV-C Disinfection Maitiro Akawanda, Kusanganisira: Inoshanda kune ese marudzi ehutachiona, kusanganisira mabhakitiriya, mavairasi, fungi uye protozoa Hapana disinfection ne-zvigadzirwa (DBPs) yakaumbwa Yakadzika capital uye mutengo wekushandisa Nyore kushandisa uye kuchengetedza Yakachengeteka. uye zvakatipoteredza f ...
222nm UV Mwenje yakachengeteka here?
Kune akawanda akasiyana wavelengths mukati meiyo yakafara UV spectrum, imwe neimwe iine yavo pachavo yekushandisa uye chengetedzo chimiro. Yakakwirira wavelengths seUVA uye UVB inogona kuva nenjodzi kuhutano hwako, asi UVC 222nm yakachengeteka kune dzinogarwa nzvimbo dzemukati ...
Kubudirira kwe222nm Ultraviolet Mwenje paKutapudza Utachiona hweSARS-CoV-2 Surface Kusvibiswa
Chidzidzo chakaongororwa nevezera chakaburitswa muAmerican Journal yeInfection Control chakaongorora kushanda kweFar-UV 222 nm kurwisa SARS-CoV-2 (hutachiona hunokonzera COVID-19) pamusoro. Muchidzidzo ichi, yakaderera Far-UV 222 nm dose ye3 mJ / cm2 yakakonzera kudzikira 99,7% mu "inoshanda" SARS-CoV-2 ...
KURWANISA COVID-19: KUSHANDISA ULTRAVIOLET CHIEDZA KUSIMBISA CT scanner
CT scans yakakosha kufungidzira zvirwere zvemapapu zvinosanganisira COVID-19, asi kuuraya utachiona michina iri pakati pekushandisa inguva inopedza. Rimwe timu revatsvakurudzi rinogona kunge rakasvika pamhinduro. Vanessa Wasta naSarah Tarney / Rakaburitswa Zvita 8 Mukuyedza kudzikisira kufema kwekufungidzira kwekufambiswa kwebasa, Resec ...
Rudzi rweUV Rwenje Runodaidzwa Kure-UVC Rakachengeteka Kuti Ushandise Pakati Pevanhu uye Unouraya> 99.9% yeAirborne Coronaviruses: Study
Chikumi 25, 2020 - Zvinopfuura 99,9% yemwaka coronaviruses aripo mumadonhwe emhepo akaurayiwa paakaoneswa kune imwe wavelength ye ultraviolet mwenje yakachengeteka kushandisa kutenderedza vanhu, chidzidzo chitsva paColumbia University Irving Medical Center yawana. "Kubva pamhedzisiro yedu, con ...
Ko UV Chiedza Chinogona Kuuraya Iyo Nyowani Coronavirus?
Ultraviolet (UV) mwenje rudzi rwemwaranzi. Iine simba rakawanda kudarika masaisai eredhiyo kana mwenje unooneka asi shoma simba pane maX-ray kana gamma ray. Iwe unogona kuburitswa kune UV mwenje kuburikidza neyakaitika zuva rezuva kana kuburikidza neakagadzirwa nevanhu masosi sematehwe ekuchenesa UV mwenje yanga ichishandiswa senzira yekuuraya utachiona senge ...
Chii chinonzi UV uye UV-C tekinoroji
Chii chinonzi UV? Iyo inowanzo kunzi ultraviolet 'mwenje,' asi UV imhando yemagetsi emagetsi ane wavelengths mapfupi pane mwenje unooneka uye wakareba kupfuura maX-ray. UV radiation inowira mumapoka matatu zvichienderana nehurefu hwayo: UVA, UVB uye UVC. Ipfupi iyo wavelength, iyo mor ...
Kobe University uye Ushio Ratidza 222 nm Kure UV-C Chiedza Kunoderedza Hwebhakitiriya Huwandu uye Zvinokonzera Hapana Kukuvara pane Ganda reMunhu.
Ultraviolet radiation C (UVC) inotsanangurwa se100 - 280 nm wavelengths UV. UVC kubva kuzuva UV haigone kusvika pamusoro penyika, nekuti iri renji yeUV inobatwa neozone layer. Yakajairwa germicidal UVC mwenje (254nm wavelength) inogona kushandiswa kurwisa nzvimbo dzisina vanhu senge ...
Chii chinonzi UV-C Kuunza Simba reZuva mukati
Chii chinonzi UV-C Kuunza Simba reChiedza cheZuva Mukati Iyo UV Spectrum UV-A, UV-B, uye UV-C zvese chikamu cheiyo ultraviolet mwenje wemwenje. UV-A inoguma mukusvinwa kweganda uye inoshandiswa mukurapa kurapa zvimwe zvinetso zveganda. UV-B ine kugona kwakanyanya kupinza uye r ...
Mwenje yeUV nemarambi: Ultraviolet-C Radiation, Disinfection, uye Coronavirus
Zvichipa kubuda kwazvino kwechirwere cheCoronavirus Chirwere che2019 (COVID-19) chakakonzerwa neruzivo coronavirus SARS-CoV-2, vatengi vanogona kufarira kutenga marambi e-ultraviolet-C (UVC) ekuuraya hutachiona mumusha kana nzvimbo dzakafanana. Iyo FDA iri kupa mhinduro kumibvunzo yevatengi nezve ...
6 Makomborero ekushandisa UV Chiedza cheiyo Disinfection
Maitiro echinyakare ekudzivirira utachiona ave achishandiswa kwemazana emakore - asi iwo akakwana here? Ichokwadi ndechekuti kunyangwe kuomesa kwakanyanya nemvura inopisa, bleach, uye mishonga inouraya utachiona inogona kupotsa utachiona hunokuvadza uye mabhakitiriya. Mune mamiriro ezvinhu akaipisisa, izvo zvinhu zvinogona kukonzera kurwara kana kutofa. ...
Hutachiona nemaVirusi uye UVC mwenje zvinogona kuvauraya?
Chii chinonzi mabhakitiriya uye mavairasi? Hutachiona uye hutachiona hunogona kufamba nemumhepo, zvichikonzera uye kuwedzera zvirwere. Vanopinda mumhepo zviri nyore. Kana mumwe munhu achihotsira kana kukosora, tumvura tudiki kana tumadonhwe twemukati twakazara nemavirusi kana mabhakitiriya anopararira mumhepo kana kupedzisira ave mumaoko mavanowaridza ...